ビットコインとは？ブロックチェーンとは？│世界の仮想通貨･暗号通貨･新国際デジタル通貨 グローバルポータルウェブサイト ｜GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
ဂယက်ထ - XRP
Bitcoin ငွေသား (BCH)
Binance ဒင်္ဂါးပြား - BNB
Crypto.com ဒင်္ဂါးပြား - CRO
အမေရိကန်ဒေါ်လာဒင်္ဂါး - USDC
OK ကိုဒင်္ဂါးပြား - OKB
ロネロ (ငွေကြေး - XMR)
ကြယ် lumenens - XLM
လီယို [UNUS SED LEO တိုကင် - LEO)
"Cryptographic ငွေကြေး - Virtual ငွေကြေးစျေးနှုန်း | မြင့်တက် - စျေးနှုန်းကျဆင်းမှုနှုန်း - လျော့ကျ - စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုနှုန်း | စျေးကွက်တန်ဖိုး - Volume- ကုန်သွယ်မှုပမာဏ Real-time ranking" အတွက်ဒီမှာနှိပ်ပါ
Bitcoin, block ကွင်းဆက်
F2f, အဆင့်အတန်းတူညီသူအချင်းအချင်းဆက်သွယ်မှု, Bitcoin, block ကွင်းဆက်
1 အဆိုပါ bit နဲ့အကြွေစေ့? တစ်ဦးကပိတ်ပင်တားဆီးမှုကွင်းဆက်?
1.1 အဆိုပါ bit နဲ့အကြွေစေ့?
အဆိုပါ bit နဲ့အကြွေစေ့?
1 virtual ငွေကြေး / cryptocurrency စျေးနှုန်း | အမြင့်ဆုံး / မြင့်တက် / မြင့်တက်မှု Real-time ranking-TOP10
2 virtual ငွေကြေး / cryptocurrency စျေးနှုန်း | အောက်ခြေမြင့်တက် / မြင့်တက် / စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှု Real-time ranking-TOP10
virtual ငွေကြေး / cryptocurrency စျေးနှုန်း | အမြင့်ဆုံး / မြင့်တက် / မြင့်တက်မှု Real-time ranking-TOP10
virtual ငွေကြေး / cryptocurrency စျေးနှုန်း | အောက်ခြေမြင့်တက် / မြင့်တက် / စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှု Real-time ranking-TOP10
ပြောင်းလဲမှုများ 7: D
ပြောင်းလဲမှုများ 30: D
စျေးနှုန်းဇယား (၇ ဒီ)
世界の仮想通貨･暗号通貨･新国際デジタル通貨 グローバルポータルウェブサイト | GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
အဓိကငွေကြေးဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်၊ အမည်၊ အမျိုးအစား၊ အသွင်အပြင်၊ ရာထူး၊ ပြောင်းလဲမှုနှုန်း၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှု၊ စျေးနှုန်း၊ ၀ ယ်ယူသည့်နည်းလမ်း၊ စျေးကွက်တန်ဖိုး၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီဇယား၊ ･ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း Blockchain နည်းပညာ၊ နည်းပညာ၊ သတင်း / ကော်လံ / အကြောင်းအရာများ / ဆောင်းပါးများဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး၊ ရောင်း / ရောင်းဝယ်မှုအတွက်အသုံးဝင်သော၊ သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက် cryptocurrencies အတွက်သတင်းဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အများဆုံးတိုး / စျေးနှုန်းတိုးနှုန်း | အမြင့်ဆုံးလျှော့ချ / စျေးနှုန်းလျှော့ချမှုနှုန်း | ငွေသွင်းငွေထုတ်အသံအတိုးအကျယ်အဆင့်
အိုင်ယာလန် - အဇာဘိုင်ဂျန် - အာဖဂန်နစ္စတန် - ယူအက်စ်အေ (ယူအက်စ်) - အာရပ် - အယ်လ်ဂျီးရီးယား - အာဂျင်တီးနား - အယ်လ်ဘေးနီးယား - အာမေးနီးယား - အင်ဂိုလာ - Antigua Barbuda - Andra - ယီမင် - ဗြိတိသျှ - မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (ယူကေ) - အစ္စရေး - အစ္စလာမ် - အီတလီ - အီရတ် - အီရန် - အိန္ဒိယ - အင်ဒိုနီးရှား - ယူဂန်ဒါ - ယူကရိန်း - ဥဇဘက်ကစ္စတန် - ဥရုဂွေး - အီကွေဒေါ - အီဂျစ် - အက်စ်တိုးနီးယား - Eswatini - အီသီယိုးပီးယား - အီရီထရိ - အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ - သြစတြေးလျ - သြစတြီးယား - အိုမန် - နယ်သာလန် - ဂါနာ - Carbo Verde - Gaiana - ကာဇက်စတန် - ကာတာ - ကနေဒါ - ဂါဘွန်း - ကင်မရွန်း - ကိုရီးယား - ဂမ်ဘီယာ - ကမ္ဘောဒီးယား - မြောက်ကိုရီးယား - မြောက်ပိုင်းမက်ဆီဒိုးနီးယား - ဂီနီယာ - Guinea Bisau - ဆိုက်ပရပ်စ် - ကျူးဘား - ဂရိ - Kiribus - ခရူဂ - ဂွာတီမာလာ - ကူဝိတ် - ကွတ် - ဂရီနာဒါ - ခရိုအေးရှား - ကင်ညာ - အိုင်ဗရီကို့စ်ကွတ် - ကော့စတာရီကာ - ကိုဘို - Comoro - ကိုလံဘီယာ - ကွန်ဂို - ဆော်ဒီအာရေဗျ - ဆာမိုအာ - Santome နိယာမ - ဇမ်ဘီယာ - စန်မာရီနို - ဆီးရီးယားလီယွန်း - ဂျီဘူချီ - ဂျမေကာ - ဂျော်ဂျီယာ - ဆီးရီးယား - စင်္ကာပူ - ဇင်ဘာဘွေ - ဆွစ်ဇာလန် - ဆွီဒင်နိုင်ငံ - ဆူဒန် - စပိန် - Sulinum - သီရိလင်္ကာ - စလိုဗက်ကီးယား - ဆလိုဗေးနီးယား - Seychelles - အီကွေတာဂီနီ - ဆီနီဂေါ - ဆားဘီးယား - စိန့်ခရစ္စတိုဖာ Nevis - စိန့်ဗင်းဆင့် - Grenadine ကျွန်းများ - စိန့်လူစီယာ - ဆိုမာလီယာ - ဆော်လမွန်ကျွန်းစု - ထိုင်းနိုင်ငံ - တာဂျစ်ကစ္စတန် - တန်ဇန်းနီးယား - ချက် - ချဒ် - ဗဟိုအာဖရိက - တရုတ် - တူနီးရှား - ချီလီ - မင်္ဂလာပါ - ဒိန်းမတ် - ဂျာမနီ - သွားရန် - ဒိုမီနီကာ - ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုသမ္မတနိုင်ငံ - Menistan torque - ကြက်ဆင် - တွန်ဂါ - နိုင်ဂျီးရီးယား - Naul - နမီးဘီးယား - နီယို - နီကာရာဂွာ - နိုင်ဂျာ - ဂျပန် - နယူးဇီလန် - နီပေါ - နော်ဝေး - ဘာရိန်း - ဟာအီတီ - ပါကစ္စတန် - ဗာတီကန် - ပနားမား - Banuatsu - Bahama - ပါပူဝါနယူးဂီနီ - ပလောင် - ပါရာဂွေး - ဘာဘေးဒိုးစ် - ဟန်ဂေရီ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - အရှေ့တီမော - ဖီဂျီ - ဖိလစ်ပိုင် - ဖင်လန် - ဘူတန် - ဘရာဇီး - ပြင်သစ် - ဘူဂေးရီးယား - Burkina Faso - ဘရူနိုင်း Darussalam - ဘရူဂျီ - ဗီယက်နမ် - ဘီနန် - ဗင်နီဇွဲလား Bolivar - ဘီလာရုစ် - ဘေလီဇ် - ပီရူး - ဘယ်လ်ဂျီယံ - ပိုလန် - ဘော့စနီးယား - ဟာဇီဂိုဗီးနား - ဘော့ဆွာနာ - ဘိုလီးဗီးယား - ပေါ်တူဂီ - ဟွန်ဒူးရပ်စ် - မာရှယ်ကျွန်းစု - မာဒါဂက်စကာ - Malaui - မာလီ - မော်လတာ - မလေးရှား - မိုက်ခရိုနီးရှား - တောင်အာဖရိက - တောင်ဆူဒန် - မြန်မာ - မက္ကစီကို - Mauritius - Mauritania - မိုဇမ်ဘစ် - မိုနာကို - မော်လ်ဒိုက် - မော်လ်ဒိုဗာ - မော်ရိုကို - မွန်ဂိုလီးယား - Monte Negro - Jordan Hashimite - လာအို - လတ်ဗီးယား - လစ်သူယေးနီးယား - လစ်ဗျား - Lichtenstein - လိုက်ဘေးရီးယား - ရိုမေးနီးယား - လူဇင်ဘတ် - ရဝမ်ဒါ - Resoto - လက်ဘနွန် - ရုရှား
$ 0.998 0.247%24ဇ
$ 0,021 0.090%24ဇ
$ 7.61 6.95%24ဇ
Band protocol ကို(BAND)
$ 1.000 0.543%24ဇ